.: အသက်စတေး၍ လမ်းပြပေးခဲ့ကြသည့် စစ်ကိုင်းသားကြယ်နီကြီးများ၏ သွေးစာရင်း
အောက်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည့် စစ်ကိုင်းမြို့သား ရဲဘော်ကြီးများသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲတို့တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည့်အပြင် ဗမာပြည် အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်အား တဗိုလ်ကျ တဗိုလ်တက်၍ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ အဆက်မပြတ် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည့် တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် မျိုးချစ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကျဆုံးသွားကြသည့် ဗိုလ်သိန်းတန်နှင့် ဗိုလ်ဘအုန်းမှလွဲ၍ ကျန်ရဲဘော်ကြီးများက ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဦးဆောင်ဆင်နွှဲသည့် လက်နက်ကိုင်ခုခံရေးတိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးကြသည့် ရဲဘော်ကြီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ယခုလို စစ်ကိုင်းသားများ၏ သွေးစာရင်းကို ပြုစုရာတွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်က နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ကျွန်တော် မသိသူ၊ မမှတ်မိသူများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ သို့ပါ၍ ရဲဘော်များနှင့် မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့၍ ကျန်ရှိနေသူများ ရှိပါက စစ်ကိုင်းသားကြယ်နီကြီးများ၏ သွေးစာရင်းထဲသို့ ဖြည့်စွက်၍ ထည့်သွင်းပေးကြစေလိုပါသည်။
တဆက်တည်း ကမ္ဘာကျော် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲအတွင်း တပြည်လုံးတွင် တနေရာတည်းတွင် ကျဆုံးသူ အများဆုံး စံတင်ရလောက်အောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည့် အာဇာနည်တွေ၏ သွေးခွပ်ဒေါင်းပျိုကြယ်နီလေးများ၏ သွေးစာရင်းကိုလည်း ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ရေးသားပြုစု၍ မှတ်တမ်းတင်ပေးကြပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
၁။ ရဲဘော် (ချစ်တီး) ဗိုလ်သိန်းတန်
၂။ ရဲဘော် ဗိုလ်ဘအုန်း
(၎င်းတို့နှစ်ဦးက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး လျှို့ဝှက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဂျပန်ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရ၍ ကျဆုံးကြသူ)
၃။ ရဲဘော် ကိုအောင်မှီ
(ဝမ်းအိုဝမ်း ကိုကျော်ဝင်းမောင်ကို ဂျပန်အကျဉ်းစခန်းမှ ကယ်တင်ခဲ့သူ။ စစ်ကိုင်း၊ ညောင်တုန်းရွာ တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသူ။)
၂၂ - ၅ ၁၉၅၁
၄။ ရဲဘော်ဦးမောင်ကို ဗဟိုကော်မတီ
၅။ ရဲဘော် ဗိုလ်မှူးကြီးလှမော်
၆။ ရဲဘော် ကိုသူတော်
(၎င်းတို့ ၃ ဦးက မြစ်ဖျားဒေသတိုင်းအတွင်း ကျဆုံး)
၇။ ရဲဘော် ဦးမောင်မောင်ကြီး (ဗိုလ်ကြင်မောင်အစ်ကို)
၈။ ရဲဘော် ဗိုလ်မန်းတင် (ဗိုလ်သူရနှင့်ညီအစ်ကို)
(စစ်ကိုင်းမြို့နယ် တစ်အိမ်တည်းရွာနှင့် ကျောက်ဆည်ရွာအကြားတိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံး)
၉။ ရဲဘော်ဦးလှိုင် ဗဟိုကော်မတီ
၁၀။ ရဲဘော်ဆရာအေးမောင် (စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်အတွင်း ၁၉၅၈ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကျဆုံး)
၁၁။ ရဲဘော်ချစ်ဆွေ (ခ) ကိုဘဝင်း
(မန္တလေးခရိုင်ပါတီအတွင်းရေးမှူး - ရဲဘော်ဦးကြည်ဝင်း ခရိုင်ကော်မတီ
- ရဲဘော်ချစ်ပိုင် - တို့နှင့်အတူ မန္တလေး ခရိုင် မေမြို့ မြို့နယ်အတွင်းက တောင်ကျွန်းရွာတွင် ရန်သူအထောက်တော်များ၏ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရ၍ ကျဆုံးသူ) ၁၉၅၉ မေလ။
၁၂။ ရဲဘော်စောမောင် (ခ) ဗိုလ်မှူးဘလှ
(ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး စစ်ကိုင်း ဗိုလ်သိန်းတန် ဦးဆောင်တပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီး။ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်အတွင်း ၁၉၅၉ တွင်ကျဆုံး)
၁၃။ ရဲဘော်ဦးဌေး (ပါတီပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်)
၁၄။ ရဲဘော်မကြီး ဒေါ်ကြင်လေး (ဗိုလ်ကြင်မောင်ဇနီး)
၁၅။ ရဲဘော်ဗိုလ်သူရ (ဗိုလ်မန်းတင်နှင့် ညီအစ်ကို)
၁၆။ ရဲဘော်ဦးချစ်သိန်း (ခ) ဗိုလ်မှူးစိုးသိန်း (တရုတ်ပြည်တနေရာတွင် ကွယ်လွန်)
၁၇။ ရဲဘော်ကြင်မောင် (ခ) ဦးထွန်း (နယ်စပ်တနေရာတွင်ကွယ်လွန်)
အလို ဇရာရစ်ဝိုင်း မြူဝေဆိုင်းသည့် စစ်ကိုင်းမြို့က စစ်ကိုင်းသားတွေ အသေများလှပါလား။
ဒါကြောင့် ပြောစမှတ်တွင်သွားပုံက သမိုင်းပြောင်တဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ခြေက ဇေယျာရွှေပြည် ကြယ်နီတွေလည်း အထွက်များ အသေလည်းများတဲ့မြို့လေ
• သူတို့တတွေသည် .....
သူတို့တသက်တာတော်လှန်ရေးဘ၀ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်ကား အတ္တကိုပယ် ပရကိုသသယ်ပိုးပြီး အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူအကျိုးကိုသာ ဦးထိပ်ထား၍ ကျရာကဏ္ဍမှာ ပေးသည့်တာဝန်ကို တာဝန်ကိုထမ်း နောက်တလှမ်းမဆုတ် အားမာန်ထုတ်၍ ရှေ့ကိုချီ အောင်လံနီကို တလူလူလွှင့်၊ ရန်သူကျည်သင့်၍ ရင်ပွင့်လို့သေပါစေ တာဝန်ကျေဖို့သာ အဓိက ရှိသမျှ ကာယ၊ဉာဏ စွမ်းအားနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည့်အပြင် အနာဂတ် တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်များအတွက်လည်း တောင်ရိုင်းဖြို၊ တောရိုင်းရှင်း၍ လမ်းထွင်ပေးခဲ့ကြသူတွေဟာလည်း သူတို့တတွေပါပဲ။
• သူတို့တတွေသည် ......
ပြည်သူအများ တုံးအောက်က ဖားပမာ ပိပြားအောင် ဖိထားသည့် သုံးလုံးသောတောင် (အရင်းရှင်၊ မြေရှင်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်) ဒီတောင်ကို သူတို့ဖြို မြင်းမိုရ်မို့လား ပမာထား၍ တင်စားရသော် ယွီကုန်းတောင်ဖြိုသလိုပ ငါဖြိုလို့မပြို ငါ့သား မြေး မြစ်တွေဆက်၍ဖြို မပြိုခံနိုင်ရိုးလား စံထားလောက်သည့် ယုံကြည်ချက်နှင့် စိတ်ဓာတ် အတုယူလောက်ဖွယ် ဇွဲသတ္တိနှင့် လုံ့လဝိရိယရှိကြသည့် တကယ့်သံမဏိနှလုံးသားပိုင်ရှင်များလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
• သူတို့တတွေသည် ....
တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတရား ဦးထိပ်ထား၍ပန်ဆင် ပြည်သူသာလျှင် အမိ၊ ပြည်သူသာလျှင် အဖ၊ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို ပျက်ပြားစေသည့် အဆိပ်ပင် ကုန်စင်အောင် ဆွဲနုတ်ပစ်မည့် တူကိုင်သောလက်၊ တံစဉ်ကိုင်သောလက်၊ ကလောင်ကိုင်သောလက်များ စုပေါင်းအားကိုယူ ဘုံရန်သူကို ဦးတည်တိုက်ရေး လမ်းညွှန်ပေးသူတွေဟာလည်း သူတို့တတွေ ကြယ်နီတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အခုတော့ သူတို့တတွေ ဖြတ်သန်းကျော်လွှားခဲ့ရသည့်ခေတ်က သူတို့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်သည့် သမိုင်းပေးတာဝန်ကို ကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်လို့ ပြည်သူ့သားကောင်းများ ကိန်းအောင်းရာ အာဇာနည်ဗိမာန်စခန်းမှာ အေးချမ်းစွာ အနားယူသွားကြပါပြီ။
သူတို့တတွေ၏ ရုပ်ခန္ဓာများ ပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်း သူတို့တတွေ၏ ဝိဉာဉ်များကတော့ တူ၊ တံစဉ်အလံတော်ကို ဝှေ့ရမ်းကာ အင်တာနေရှင်နယ်တေး သံပြိုင်ဟစ်ကြွေး၍ တိုက်ပွဲဝင်မျိုးဆက်များကို အားပေးလျှက် ရှိနေကြပါလိမ့်မည်။
• ကျဆုံးသူ ရဲဘော်အပေါင်းတို့
သင်တို့၏သွေးသမိုင်းကို ဗမာပြည်အုပ်စိုးသူ အဆက်ဆက်က အမှန်ကို အမှားလုပ်၊ အမှားကို အမှန်လုပ်၊ ဖြူဖြူပေါ် မဲမဲတင်လို့ တနည်း ငွေမင်သုတ်၍ ဖုံးအုပ်ကာတဖုံ၊ ကျည်ဆန်မုန်တိုင်းနဲ့ ချေဖျက်လို့တမျိုး ဘယ်လိုပင်နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ချေဖျက်သော်လည်း မချေဖျက်နိုင်ကြောင်း နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်သမိုင်းက သက်သေပြနေပါပြီ။
နှစ်တွေ လတွေ အချိန်ကြာညောင်းလို့
အော် မမေ့နိုင်ပေ တမ်းတခါနေ
ဖြေမပြေ လွမ်းသူပန်းခွေ ကမ်းလင့်သာပဲနေ
ကျဆုံးသူ စစ်ကိုင်းသားကြယ်နီကြီးများ၏ သွေးစာရင်းကို ရေးသားပြုစုပြီး ကျဆုံးသူရဲဘော်အပေါင်းအား လွမ်းသူပန်းခွေအဖြစ် ကမ်းလင့်လိုက်ပါသည်။
ပြည်သူတို့၏ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ မုချအောင်ရမည်။
၃၀ - ၁၀ - ၂၀၁၅
Posted by ယမုန် at 1:05 PM
ဗမာပြည်အတွက် ရှာရီရာ လက်ဆောင်ယူလာတဲ့ ၉၆၉ (အပိုင်း ၂)
ပထမအခန်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သလို ဤစာအုပ်သည် လက်ရှိ ထိပ်တုိုက်ရင်ဆိုင်မှုများကို နားလည်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ရန် အသိ သညာ အခြေခံစနစ်ဘောင် (framewor...
ပမာအားဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားကို လုပ်ကြံလာသော ရှာရီရာပြုခြင်း (အစ္စလမ် ဓမ္မသတ် ရှာရီရာကျမ်းမှ ကျင့်ထုံးတို့ကို လူမှု ဥပဒေအဖြစ် ကျင့်သုံး...
ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်လေး ပြောဦးမယ်။ ဦးဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်တိုင် အဆင့်အတန်းတွေ ကွဲမှန်း မသိကွဲကုန်ကျပြီ၊ အခုလက်ရှိ အနေအထားကိုကြည့် ချမ်းသာတဲ...
တော်လိုက်တဲ့ကောင်တွေ ဘယ်လောက်တော်သလဲတောင် ချီးမွမ်းရခက်သပ။ - ၁၉၆၂ အာဏာ သိမ်းပြီးထဲက ဖမ်းလိုက် သတ်လိုက် တာကို ခံရတဲ့ လူသားတွေ တောရောမြို့ပါမ...
ဗမာပြည်အတွက် ရှာရီရာ လက်ဆောင်ယူလာတဲ့ ၉၆၉ (အပိုင်း ၈)
သိမ်ငယ်နေသော ဘုရားလောင်း “အနောက်ပြုမှု” အပေါ် ဆန့်ကျင်ခြင်းကို ယနေ့ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် တွေ့ရတတ်ပါသည်။ ထိုဆန့်ကျင်ခြင်းတို့သည် အ နောက်ကလာ ကချလ...
ခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့မြွေဆိုတာ အစာအိမ်တလုံးထဲပေမဲ့ တခေါင်းနဲ့တခေါင်း မတည့်ဘူး
ခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့မြွေ သမတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နှုတ်ထွက်စာတင်တဲ့သတင်းတွေ ထွက်လာတယ်။ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာထက် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရထဲမှ...
ရန်ကုန်ကို ကိုင်လှုပ်သော ထို (၇) ရက် (အပိုင်း ၁)
၁၉၈၈ ခု မတ်လ ဒုတိယအပတ် ငိုက်မြည်းနေသော ရန်ကုန်မြို့တော်၌ ထူးထူးခြားခြားလက္ခဏာ တစုံတရာမျှ မတွေ့ရချေ။ ခရီးသည်များနှင့် ကြပ်သိပ် နေသော ဘတ်စ်ကာ...
Blog Archive June (98) October (1) November (2) December (2) January (3) February (4) March (3) April (3) May (10) June (5) July (3) October (1) November (2) December (4) January (5) February (5) March (77) April (1) June (1) July (1) August (1) November (4) December (11) January (1) August (1) September (11) October (13) November (1) December (3) January (14) February (11) March (13) May (87) June (26) July (39) August (27) September (31) October (48) November (24) December (11) January (10) February (16) March (3) April (21) May (8) June (15) July (9) August (5) September (22) October (5) November (2) January (1) May (2) December (1)
Copyright Naytthit Media . Powered by Blogger.